Dowladda Mareykanka oo ku dhawaaqday Ergey cusub oo qaabilsan Geeska Afrika - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Dowladda Mareykanka oo ku dhawaaqday Ergey cusub oo qaabilsan Geeska Afrika - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken magacaabay Ergayga Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Africa Mike Hammer.
Ergeyga cuusb ayaa bedeli doona Ergaygii hore David Satterfield oo xilka is-casilay bishii April. “Waxaan ku dhawaaqayaa in Danjire Mike Hammer uu bedeli doono Ergeyga Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika. Waxaan uga mahadcelinayaa Danjire Satterfield waayo-aragnimada iyo go’aan qaadashada uu u keenay xilka, waxaanan rajaynayaa dadaalka iyo aragtida uu danjire Hammer hadda ku bixin doono dadaallada Geeska Afrika” ayuu yiri Blinken.
Xoghaye Blinken ayaa sheegay in magacaabista danjire Hammer ay sida ay Mareykanka uga go’an tahay dadaallada diblumaasiyadeed ee gobolka, wuxuuna sheegay in Mareykanku sida ugu dhakhsaha badan u taageerayo geeddi-socod siyaasadeed oo loo dhan yahay oo ku wajahan nabadda, amniga guud, iyo barwaaqada dhammaan dadka Itoobiya.
Previous articleTiradii ugu yareyd oo xaadirtay kulankii baaqday ee Baarlamaanka iyo Sababta
Next articleKorneyl ka tirsanaa ciidamada Milateriga oo u dhintay Qarax lala beegsaday iyo Alshabaab…